Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 28
Fitiavan-tanindrazana miaina, ampiainina, iainana…
Par Taratra sur 03/04/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Lasa resaka tato ho ato ny amin’ny fitiavan-tanindrazana. Mbola mety mampifanditra na ny amin’ny hoe tanindrazana aza: an’ny razana ny tany fa tsy an’ny tena; na maty ny tena, vao tompony. Izay no maha saropady ny tanindrazana: tsy amidy, tsy atakalo. Ndrao hananan-tsiny, hitodian’ny atao… Mety ho resaka koa ny amin’ny fitiavan-tanindrazana: ny tany no […]
Fahavalo tsy aiza sy tsy hafa, fa ao sy eo ihany…
Par Taratra sur 01/04/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Fampirafesana ny samy Malagasy, fahantrana, kolikoly, tsy fandriampahalemana, fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena… Ireo no hoe fahavalo tsy maintsy atrehina ary ananana adidy horesena, raha ny nambaran’ny tomponandraiki-panjakana ambony iray vao tsy ela akory izay. Mby aiza? Manaiky hampiadiana ho azy amin’izao ve ny vahoaka ifotony? Ny fiainana isan’andro vaky aza, manahirana azy: tsy fandriampahalemana, […]
Fitiavan-tany ngazana sy fahalahelovan-tena
Par Taratra sur 31/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Adihevitra be tamin’ny fahatsiarovana ny faha-70 taon’ny 29 marsa 1947 teo ny amin’ny hoe fitiavan-tanindrazana. Aiza ho aiza? Mananatra sy manome lesona amin’izany ny sasany, nefa tsy mandini-tena. Raha mba misy mandini-tena amin’izay lazainy sy ataony aza, mihevi-tena ho zavatra ho azy amin’izany. Toy izany ny amin’ny hoe fahaleovantenan’ny firenena: mby aiza? Misy milaza fa […]
« Misokatra ny fanadihadiana… »
Par Taratra sur 30/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
« Efa misokatra ny fanadihadiana mikasika izao raharaha izao mba hikarohana ireo rehetra mety ho voakasika amin’izany, na mivantana na ankolaka ». Izay ny voalaza tao anatin’ny fanambaran’ny zandarimariam-pirenena, omaly, mikasika ny fahatrarana volamena 2 kg sy 240 g, saika haondrana an-tsokosoko any ivelany, teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, afakomaly. Teratany karana vavy roa ireto sarona nanao izany. […]
Fitiavan-tanindrazana, fitavanan-tanindrazana …
Par Taratra sur 28/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
70 taona ny 29 marsa 1947. Eo hatrany ny tsy fitoviam-pijery ny amin’ny tantara sy ny marina momba izany: tolom-panafahan’ny tia tanindrazana sa famonoana faobe nataon’ny mpanjanatany ny Malagasy? Na fanosehan’ny Malagasy ny mpanjanatany sa famonoana tia tanindrazana… Mbola adihevitra izay, mila fikarohana, fampitoviam-pijery. Ny marina, marina ihany: tokana, fa tsy zato na arivo. Na […]
Hifampitsara eto amin’ny farany…
Par Taratra sur 27/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Raharaha tokoa ny raharaham-pitsarana tato ho ato, na lasa resabe ny tontolon’ny fitsarana. Taona vitsivitsy izay, anisan’ny nahazoana fitarainana be indrindra amin’ny fisian’ny kolikoly ny sehatry ny fitsarana. Araka ny tatitry ny Bianco sy ny fanadihadian’ny Afrobaromètre, ohatra, io. Lasa resabe ny tontolon’ny fitsarana. Eo, ohatra, ny hoe fitsaram-bahoaka mirongatra etsy sy eroa. Tsy hita […]
Fanontaniana tsy mila valina fanontaniana..
Par Taratra sur 25/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Anisan’ny manahirana ny vahiny amin’ny Malagasy ny famaliana fanontaniana amin’ny fanontaniana ihany. Fahalainana miresaka, fakana toky, fizahana fototra… ? Na fanontaniana fampieritreretana, na tsy mila valiny… Amin’ny “Raharaha Antsakabary”, maro ny baraingo mihantona. Toy izany koa ny “Raharaha Rehavana Michel”. Inona no ataon’ny fitondrana foibe? Sarotra ny raharaha: tena hanome fahaleovantena sy fahalalahana ny mpitsara […]
Tany misy fanjakana… tsy mahavita andraikitra
Par Taratra sur 24/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Mbola misy fanjakana ihany ve eto? Na manao sy mahavita antsakany sy andavany ny andraikiny andrasan’ny vahoaka aminy izany… Eo, ohatra, ny fampanjakana ny fandriampahalemana, ny fitandroana ny firaisam-pirenena, ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany… Azo anombanana izany ny famotehana izay mihetsika rehetra amin’ny fampiasana herim-pamoretana sy ny fanjakazakan’ny mpitandro filaminana. Efa misy izao […]
Par Taratra sur 23/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Ady amin’ny dahalo any ifotony, fandaminana ny faritra saropady misy fitsaram-bahoaka, ady amin’ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena… Ireo indray no hoe anisan’ny imasoana amin’ny fitandroana filaminana amin’izao, indrindra ny fidinana sy fiatrehana ny any ifotony ny raharaha… Tsy ratsy aloha ilay paika, irariana mba hitera-bokatra sy hisy fiantraikany mivantana eny anivon’ny vahoaka: hisy amin’izay ny […]
Antsakabary… antsakany sy andavany
Par Taratra sur 22/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Ahoana ihany ity raharaham-pirenena ity? Indrindra ny fiainam-bahoaka… Mangingina ratsy ny fanampiana traboina. Odian-tsy hita ny “Raharaha Antsakabary“, na tsy hita be ihany ny tohiny. Efa saika nipoaka koa ny fitsaram-bahoaka, tany Ambanja, Manarara Avaratra… Inona ny vahaolana? Tsy mahita afa-tsy ny fampahafantarana lalàna ny fanjakana, fanomezan-tsiny, fampitandremana, fanilihana andraikitra… Milaza ny fitondrana fa samy […]
Mahasoa na maharatsy ny vahoaka ny ataon’ny mpitondra
Par Taratra sur 21/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Mby aiza ny toe-draharaham-pirenena amin’izao? Tsy hita be ihany izay hoe fampandrosoana. Mangingina ratsy izao na ny famonjena sy fanampiana ireo traboina aza. Efa trabonjy avokoa? Na am-boalohany ihany ny rodorodoben’ny tomponandraiki-panjakana hoe tena mahatsiaro vahoaka, mitsinjo, manampy… Na ny fiainan’ireo traboina aza, tsy firy no tena miverina amin’ny laoniny: simba na rava trano, dibo-drano… […]
Par Taratra sur 20/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Anisan’ny mampiavaka izao fitondrana izao ny tsy fiaikena fahadisoana: lehibe tsy meloka, tsy mba diso. Ailika amin’ny hafa hatrany ny fahadisoana sy ny tsy fahombiazana amn’izay atao. Ailika amin’ny mpitondra teo aloha izany, na amin’ny mpanohitra; eny, na amin’ny vahoaka aza. Tsy vitan’ny hoe tsy mahadini-tena amin’izany ny mpitondra; raha mba mandini-tena aza, mihevitra azy […]
Par Taratra sur 18/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Telo taona mahery izay ny fitondrana. Tapitra ny fotoana famindram-po hoe avela hiasa, aza tsikeraina. Inona ny vita? Iaraha-mahita, na tsy hita ihany koa: misy ve, ohatra, ny fiovana ifotony? Mba tena misitraka fihatsaram-piainana ve ny isan-tokantrano, na milofo amin’ny fitadiavana toy inona aza. Mahalala sy mitsara izay iainany isan’andro ny vahoaka: fidangan’ny vidim-piainana, tsy […]
Fanampiana hialana amin’ny fanampiana…
Par Taratra sur 17/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Fitenenana nalaza tamin’ny Repoblika II ny hoe fanampiana hialana amin’ny fanampiana. Mby aiza? Hatramin’izao, ny eo ihany no eo. Miharatsy andro aman’alina aza… Tsy afa-bela amin’ny fangatahana fanampiana any ivelany ny fitondram-panjakana isaky ny mihetsika. Mandra-pahoviana? Inona no ampahatsiahivana sy itanisana ny lasa amin’izao? Mangataka fanampiana ho an’i Madagasikara amin’ireo firenena any ivelany indray izao […]
Par Taratra sur 16/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
“Handray ny fepetra izay tandrify azy ny fitondram-panjakana. Raha misy mihoa-pefy, na avy aiza na avy aiza izy ao amin’ny antokon-draharaham-panjakana: handray fepetra hentitra ny fitondram-panjakana momba an’izay. Mahazo matoky an’izay ny vahoaka.“ Io ny nambaran’ny filoha Rajaonarimampianina tany Mahajanga, ny 26 febroary, momba ny fandoroan’ny polisy tanàna tany kaominina Antsakabary, Befandriana Avaratra. Mby aiza? […]
Par Taratra sur 15/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Miroso ihany sa nangina tanteraka ny fanadihadiana mikasika ny “Raharaha Antsakabary Befandriana Avaratra” ? Asa aloha, fa tsy mbola nahazoam-baovao mikasika izany, hatreto ny eo anivon’ny fitondram-panjakana. Teo rahateo ny zava-doza nahazo ny firenena, noho ny fandalovan’ny rivodoza Enawo, ka ndeha atao hoe revo amin’ny fiatrehana ny fanarenana ireo faritra niharam-pahavoazana sy ny fanampiana ireo […]
Fanampiana traboina, fifandroritana politika
Par Taratra sur 14/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Nangingina ratsy ny politika talohaloha teo, na niteraka adihevitra be aza ny “Raharaha Befandriana Avaratra“, nandoroan’ny polisy 42 tanàna dimy. Nony nandalo ny rivodoza Enawo, lasa fifandroritana politika ny fanampiana traboina. Raha ny marina, na noho ny fifampitsinjovana amin’ny maha samy Malagasy sy ny fitiavan-tanindrazana ihany aza: tokony hampiray hina ny fahavoazan’ny vahoaka noho ny […]
Voan’ny hava-mahatratra amin’ny voin-kava-mahantra…
Par Taratra sur 13/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Voin-kava-mahatratra: mahavoa ny tena ny fahavoazan’ny hafa eo akaiky, indrindra ny havana. Izay no ifamonjena sy ifanampiana amin’ny loza: vonjy rano vaky, rano tondraka… Nefa saika tsy izay loatra no manesika sy manosika ny sasany manolotra fanampiana amin’izao: takalom-patsa, vidim-pihinanana; dony tapany, handoa erany. Mitsidika ireo traboina sy ny fahavoazana vokatry ny rivodoza, ohatra, ny […]
Misy tra-bonjy noho ny fisian’ny traboina
Par Taratra sur 11/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Taorian’ny haintany, tonga ny orambe sy ny tondra-drano. Valim-piakarana, fidinana? Nefa tsy mba mahatsiaro na misitraka izay fiakarana na fihatsaram-piainana ny vahoaka hatramin’izay, raha amin’izao fitondrana izao fotsiny, ohatra. Fiakaran’ny vidim-piainana no mibahan-toerana sy zakaina. Eo koa ny fiakaran’ny hatezeram-bahoaka noho ny afitsoky ny mpitondra: tsy hita izay tena vita amin’ny fiainam-bahoaka, famotehana aza. Anisan’ny […]
Traboina… fanararaotan’ny sasany
Par Taratra sur 10/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy mihoatra ny folo aloha ny isan’ny maty tamin’ny fandalovan’ny rivodoza Enawo, namakivaky an’i Madagasikara, ny 7-10 marsa. Tsy misy maniry ny hitomboan’izany isan’ny maty izany. Efa tafakatra iray alina mahery ny isan’ny traboina noho ny tondra-drano; fianjeran’ny trano, hazo… Amin’izany, ny voin-kava-mahatratra. Andraikitry ny rehetra ny mifanome tanana, araka izay tandrify azy avy. Na […]
Tsara fiomanana tsy ho tampohin’ny loza…
Par Taratra sur 08/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Izay tokoa ilay teny filamatry ny BNGRC, “izay tsara fiomanana, tsy ho tampohin’ny loza”. Manampy ny traboina araka izay eo am-pelantanany ity rafi-panjakana ity. Fanampiana fe fanampiana ihany ny azy fa tsy afaka miantoka ny fiveloman’ny tsirairay. Midika izany fa miady irery araka izay tandrify azy ny isan-tokantrano, rehefa tonga ny antambo. Koa, ho sarotra […]
Ny ady tsy ahi-mahatratra…
Par Taratra sur 07/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Noho ny tsy fahamatorana, kitsapatsapa lava, kitoatoa, tsy fahombiazana, tsy fahamarinan-toerana… Tsy hita intsony izay ilazana azy. Tsy mijanona ny karazam-pitakiana sy fangatahana: fametraham-pialana, tsy firotsahan-kofidina, tsy fanilihana kandidà, fifidianana alohan’ny fotoana… Toa tsy misy hita afa-tsy ny lafiratsiny amin’izao toe-draharaham-pirenena izao? Fandio iray siny aza, tsy mahaleo ny fandoto eran-tandroka. Vao mainka raha be […]
Dondrona, kentrina… «adala»
Par Taratra sur 06/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy hita ihany izy ity. Lazain’ny praiminisitra indray fa hoe tsy misy ifandraisany amin’ilay ”Raharaha Befandriana Avaratra” nahoraka sy nipoaka be teto amin’ny firenena iny ny nanalana ny minisitry ny Filaminana anatiny sy ny nanoloana azy ”. Rehefa tsy noho iny ”Raharaha Befandriana Avaratra” iny àry, inona indray izany ny antony ? Nambarany fa hoe […]
Valim-piakarana izao: fidinana amin’izay…
Par Taratra sur 04/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Nimasoan’ny fitondrana nandritra izay telo taona izay ny famafisam-pahefana, ny fitoniana politika… Tsy hita izay hoe fanovana amin’ny fanarenam-pirenena, fanatsarana ny fiainam-bahoaka, fampandrosoana… Vao mainka miharatsy andro aman’alina aza ny raharaha: tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, tsy fanjarian-tsakafo… Tonga amin’ny valim-piakarana? Fidinana amin’izay noho ny fisian’ny tsimatimanota jerem-potsiny, ny kolikoky avo lenta, ny kiantranoantrano lava… Eo […]
Tsy tan-dalàna, fa tsy mahatam-po…
Par Taratra sur 03/03/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Resabe hatrany ny momba ny fitsaram-bahoaka, indrindra ny amin’ny nafitsoky ny polisy tany Befandriana Avaratra. Ny marina, marina ihany. Kibo mitsara tena amin’ny ataony ny tsirairay. Na ahoana na ahoana, tsy hita intsony izay hoe fanjakana tan-dalàna. Mbola misy izay hoe fanjakana? Maro ny mety anton’ny fitsaram-bahoaka, odian-tsy tenenina sy tsy hita: tsy fanarahan-dalàna, fa […]